रिटेल रेडि प्याकेजिंगले K9 मास्कीलाई शार्क ट्याank्कमा मद्दत गर्दछ - राम्रो एयर टोली द्वारा K9 मास्क
घर > वायु प्रदूषण कुकुर ब्लग > रिटेल रेडि प्याकेजिंगले K9 मास्कलाई शार्क ट्याank्कमा मद्दत गर्दछ
मूल रूपमा पोष्ट गरिएको Roastar ब्लग मार्च,, २०१ - - https://www.roastar.com/blog/having-retail-ready-packaging-helps-k9-mask-on-shark-tank.
Roastar उत्पादन प्याकेजि।
टिभीमा तपाईंको उत्पादन हेर्न यो सँधै राम्रो छ। त्यसैले जब Roastar ग्राहक K9 Mask® शार्क ट्याank्कमा देखा पर्‍यो हालसालै हामीले सोचेका थियौं कि बस्न र प्याकेजिंग कुराकानी गर्न र उनीहरूको उद्यमशीलताको बारेमा सुन्न रमाईलो हुनेछ, र किर्बी होम्स त्यसो गर्न पर्याप्त दयालु थिए।
हो, त्यो हेर्नको लागि एक विस्फोट थियो। त्यसो भए, हामी ब्याक अप गरौं। के तपाईंलाई Roastar गर्न नेतृत्व?
हामीले केही उद्यमीहरूसँग कुरा गर्यौं जसले भने, "यदि तपाइँ तपाइँको उत्पादन र प्याकेजि pack ठीक रूपमा प्राप्त नगरेसम्म पर्खनुभयो भने, ढिलो हुनेछ। बस जानुहोस्, हेर्नुहोस् यदि तपाईं यसलाई बेच्न सक्नुहुन्छ, प्याकेज गर्नुहोस् यद्यपि तपाईं सक्नुहुन्छ, र हेर्नुहोस् यदि तपाईं बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। ” हामीले प्रकारको सुरुवातमा प्याकेजि withको साथ त्यो तरीका अपनायौं। हामीसँग सुरु गर्न सहि प्याकेजिंग नहुन सक्छ तर हामीलाई केही चाहिन्छ। हामीले भर्खर स्पष्ट एसीटेट ब्याग किनेका छौं र दुई कार्ड इन्सर्टहरू प्रिन्ट गरेका छौं। हामी केवल एउटा स्थानीय प्रिन्ट शपमा जाँदै थियौं र ११ पाना बाट 8 प्रिन्ट गर्दै थिएँ र म त्यहाँ प्रिन्टरमा बसिरहेको थिएँ र कटर आफैंमा बसिरहेको थिएँ र हामीलाई चाहिएको धेरै इन्सर्टहरू मात्र काट्ने गर्थें। उनीहरूले समय लिए र तिनीहरू ठीकै थिए।
नयाँ उत्पाद भएकोले हामीले धेरै कुरा बुझाउनुपर्‍यो र हामी स्पष्ट हुनुपर्‍यो। हामीले सोच्यौँ कि ती आवेषणहरूले हामीलाई सूचना अपडेट गरिरहने लचिलोपन दिनेछ, तर जब हामीले लेबरलाई प्रिन्ट गर्न, कटाई गर्न, र मास्कहरू उत्पादन गर्ने ठाउँमा घुसाउने झोलाहरू र झोलाहरू मेल गरिरहेको थियौं, हामीले बुझ्यौं कि हामीले पनि तिर्दै छौं। प्याकेजि forको लागि धेरै। यदि हामी नाफा बदल्न चाहान्छौं, तब प्याकेजि too्ग धेरै खर्च हुन सक्दैन।
त्यसो भए, म प्याकेजि companies कम्पनीहरूको अनलाइन खोजी गर्दैछु, र Roastar मेरो खोज इञ्जिनमा धेरै माथि आयो, त्यसैले मैले तपाईंलाई सजीलै भेट्टाए। त्यसपछि म Roastar को बारे मा अधिक सिकें र मैले महसुस गरे कि हामी साना रनहरू गर्न सक्दछौं, यदि आवश्यक छ भने १००, र त्यो ठूलो प्लस थियो। उनीहरूले यो पनि सुस्पष्ट बनायो कि यदि मैले 100,००० वा १००० गरें भने म त्यो मूल्य भाँच्नेछु जुन मलाई चाहिन्छ, जसले हाम्रो बेच्ने वस्तुहरूको लागत घट्छ र हामी अझ राम्रो प्याकेजको साथ बढी नाफा कमाउन सक्छौं। त्यसैले मूल्य लाभ र भोल्यूम ब्रेक दुबै अत्यन्त उपयोगी थियो।
कसरी झोला डिजाइन प्रक्रिया को बारेमा?
मैले यो कलाकृति अपलोड गर्न कसरी एडोब इलस्ट्रेटरको प्रयोग गर्ने भनेर सिक्नुपर्‍यो, तर एक उद्यमीको रूपमा म अवरोधहरू हटाउन चाहन्छु र मेरो व्यापारलाई निरन्तरता दिन मैले के चाहिन्छ भनेर जान्न चाहान्छु।
ईमान्दार हुनको लागि, यो सुरुमा थोरै डराउने कुरा थियो, तर यदि मैले डिजाइनमा केहि पेस गरेको छु भने म Roastar बाट तत्काल मद्दत प्राप्त गर्छु।
के तपाइँलाई Roastar को डिजाइनर शोकेसको बारेमा थाहा छ जहाँ हामी तपाइँलाई तपाइँको प्याकेजि forको लागि एक डिजाइनरको साथ समात्न सक्दछौं?
मैले गरेन, तर अब म गर्छु! मानिस, यदि तपाईले मान्छेहरु भन्न सक्नुहुन्छ कि, "हे तपाई Fiverr लाई छोड्न वा अन्य डिजाइनर आउटसोर्सलाई छोड्न सक्नुहुन्छ, किनकि हामी तपाईकोलागि त्यो यहाँ गर्न सक्दछौं," त्यसो भए हाम्रो जस्तो कम्पनीहरुका लागि महान छ।
K9® मास्कको लागि प्याकेजि ?्गले के भूमिका खेल्दछ?
शार्क ट्याank्कमा भएपछि हामीलाई सोधिएको एउटा कुरा हाम्रो उत्पादन कत्तिको खुद्रा हो? के यो शेल्फ तयार छ? यो एक शेल्फ मा खडा गर्न सक्छ? के यो खम्बामा झुक्न सक्छ? के तपाइँसँग यूपीसी कोड छ? उत्पाद वजन? अमेरिका नियमहरु? Roastar संग, हामीसंग हामीलाई चाहिने सबै थियो। हामी खुद्रा तयार थिए। यी चीजहरू थिए जुन हामीले गेटबाट बाहिरको आवश्यक पर्दैनथ्यो जब हामी केवल उत्पाद बनाउँदै हाम्रो वेबसाइटमा बेच्दै थियौं, तर जब समय आयो, हामी तयार थियौं।
जब तपाईले पहिलो पटक Roastar ब्यागहरू आफ्नो हातमा थाल्नुभयो तपाईले के सोच्नुभयो?
ठीक छ, पहिले हामीले यो महसुस गर्यौं कि हाम्रो पुरानो एसीटेट झोलाले कसैको औंलाको झिल्लीलाई बढी समात्दै छ, हाहा। मलाई थाहा छ कि यो अनौंठो कुरा भन्न को लागी हो, तर तिनीहरू पनि चुचिए र कुच्रिए र राम्रोसँग समातिएन। हामीले ती पठाउँदा तिनीहरू मेलमा पनि झुके।
Roastar बाट हाम्रो नयाँ झोलाहरूको तुलनामा जहाँ म थिएँ, "ओह, यो धेरै राम्रो लाग्छ।" तपाईं यससँग सामग्रीलाई गडबडी गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा गडबड हुनेछ र यसले यसको आकार राख्दछ, जसले ग्राहकलाई सबै तरिकाले इन्भन्ट्रीबाट उत्तम प्रस्तुतीकरणको लागि बनाउँदछ।
मलाई रोस्टरको स्ट्यान्ड-अप पाउचको बारेमा के मनपर्दछ, त्यो पनि हामी स्पष्ट विन्डो गर्न सक्छौं। जब हामी सुरु गर्‍यौं हामीसँग भर्खर रंग निलो रंग थियो, तर ग्राहकहरू जहिले पनि सोध्यो यदि हामी बिभिन्न रंगहरू गर्छौं भने। सुरुमा, यो धेरै धेरै काम र ईन्भेन्टरीको जस्तो लाग्थ्यो, तर हामी केवल हाम्रो झोलामा रंगीन स्टिकर राखी टाढा सर्नको लागि सक्षम भयौं र हाम्रो पाँचै रंगहरू प्रदर्शन गर्दै प्याकेजिंगको बारेमा केहि पनि परिवर्तन गर्न सक्दैनौं। यो हाम्रो लागि खासै राम्रो गुण हो किनभने प्याकेजिंगको स्पष्ट विन्डोको माध्यमबाट रंग कुकुरमा स्पट भयो।
त्यसोभए नयाँ प्याकेजि्गले केही फरक पारे?
हामी विश्वास गर्दछौं कि प्याकेजिंगमा व्यावसायिकताको स्तरले भित्र उत्पादनको गुणस्तरलाई बोल्दछ, र त्यसैले कसैको भावनात्मक अपेक्षाहरूको स्तर बढेको छ। जब उनीहरूले राम्ररी डिजाइन गरिएको प्याकेज खोल्दछन्, र उनीहरूले त्यस उत्पादनलाई बाहिर निकाल्दैछन्, तिनीहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा पहिल्यै अनुमान लगाइरहेका छन् कि यो राम्रो हुँदैछ। खराब प्याकेजि्गले भित्र जे पनि हो राम्रो र कम गुणस्तरको रूपमा गर्दैन।
तपाइँ अरू उद्यमीहरुलाई कसरी Roastar अनुभव वर्णन गर्नुहुन्छ?
ठीक छ, हामीले भर्खरै अर्डर गरेका थियौं १,17,000,००० ब्यागहरूका लागि। म एक प्याकेजि partner पार्टनर पाएकोमा धन्यवादी छु जसले मलाई मेरो व्यापार बढाउन, छोटो रनको लागि अनुमति दिँदछ, र मेरो प्याकेजि ofको गुणस्तर बढाउँदछ, जुन मेरो ग्राहक अनुभवको बारेमा हो। अन्तमा, तिनीहरूले मलाई लाभदायक बन्न मद्दत गरिरहेका छन् किनभने ती हाम्रो लागि प्याकेजि ofको लागत कम गर्दैछन्।
हामीसँग, कर्बी, र K9 मास्कालाई अगाडि बढ्नको लागि शुभकामनाको लागि समय निकाल्नुभएकोमा धन्यवाद! हामी तपाईंको अर्को उपस्थितिको लागि हाम्रो टिभी हेर्दै छौं!